भारतीय अखबारमा टिप्पणीः ‘मोदीजस्तै छन् नेपालका ओली’ मोदी र ओलीमा फरक छैन - Himali Patrika
भारतीय अखबारमा टिप्पणीः ‘मोदीजस्तै छन् नेपालका ओली’ मोदी र ओलीमा फरक छैन
हिमाली पत्रिका २२ असार २०७७, 9:43 am
काठमाडौं। नेपालमा जारी राजनैतिक हलचलले भारतमा पनि ठूलो तरंग ल्याएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारले केही यस्ता कदमहरु चालेको छ जुन भारतलाई पचिरहेको छैन । भारत नेपालमा ओली सरकार रहोस् भन्ने चाहँदैन । नेपालको संसदीय इतिहासको पछिल्लो ३ दशक भारतले नेपालको सत्तामा उलटफेर गराइरह्यो । तर, अहिलेको सरकार दुई तिहाइ बहुमतको जगमा उभिएकोले भारतलाई यो सरकार ढलाउन अहिलेसम्मकै ठूलो बल लगाउनु परिरहेको छ ।
यही बीचमा भारतीय अखबार दैनिक भास्करले एक जना नेपालका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकसँग यसबारेमा कुरा गरेको छ । काठमाडौं युनिभर्सिटीमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलले दैनिक भास्करसँग कुरा गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री ओली भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटीका पीएचडी प्याकुरेलको दैनिक भास्करमा हिन्दी भाषामा प्रकाशित टिप्पणीको नेपाली अनुवाद –
भारत र चीनको बीच जारी तनावका बीच नेपाल फ्याक्टर पनि अगाडि आएको छ । नेपालमा सत्तारुढ प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले चीनलाई धेरै महत्व दिएको मानिएको छ । ८ मेमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ८० किलोमिटर लामो लिपुलेक धार्चुला सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनायो ।
यसअघि पनि नेपाललाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको नक्सामा देखाइएकोप्रति आपत्ति थियो । भारतीय सीमासँग जोडिएका पोस्टमा नेपाली सेना पनि तैनाथ गरियो । यो पहिलो पटक भयो । ताजा तनावलाई मध्यनजर गर्दै दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुको कुराकानी सबैभन्दा जरुरी छ । किनकि नीति र निर्णय दुवै उनीहरुकै हातमा छ ।
मोदी र ओलीमा फरक छैनः तीन कुरामा बुझौं
१. दुवै राष्ट्रवाद वा भनौं कट्टर राष्ट्रवादको मुद्दाबाट सत्तामा आए । यद्यपि दुवैको राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक छ । मोदीले नेपालविरुद्ध केही आर्थिक कठिनाइ खडा गरे । ओलीले यो मुद्दालाई चुनाव जित्नको लागि उपयोग गरे । यदि यस्तो नभएको भए ओली सत्तामा पनि हुँदैनथे ।
२. दुवै नेता नयाँ किसिमको या भनौं २१ औं शताब्दीको पूँजीवादमा विश्वास गर्छन् । यद्यपि मोदी जहाँ हिन्दूत्वको कुरा गर्छन् ओली कम्युनिष्ट विचारधारालाई बढावा दिन्छन् ।
३. तेस्रो विन्दू रोचक छ । खासमा दुवै विस्तारवादको विरुद्ध छन् । मोदी जहाँ चीनको विस्तारवादको विरोध गर्छन् त्यहीँ ओली भारतमाथि विस्तारवादको आरोप लगाउँछन् । हालैका घटना यसको उदाहरण हुन् ।
नेपाल–भारतबीचको विवादको कारण चीन होइन
एक वा दुई पटक यस्तो भयो जब नेपालको मामिलामा कुनै फैसला लिनुभन्दा पहिले भारत र चीनले एक अर्कालाई विश्वासमा लिए । कालापानी र लिपुलेकको मामिला यस्तै हो । नेपाल २९ अप्रिल १९५४ मा तिब्बतमा भएको भारत–चीन सम्झौताबारे राम्रोसँग जानकार छ जहाँ पहिलो पटक लिपुलेकलाई भारतीय तीर्थयात्रीलाई अनुमति दिइने ८ सीमामध्येमा समावेश गरिएको थियो ।
८ मेमा राजनाथले जुन सडकको उद्घाटन गरे त्यो २०१५ मा मोदीको चीन यात्राको क्रममा लिपुलेकको माध्यमबाट व्यापारिक रुट बढाउनको लागि भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको नै हिस्सा हो । यो विषयको जानकारी त्यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्री रहेका सुशील कोइरालाले पाएपछि उनले भारत र चीन दुवैलाई कूटनैतिक नोट पठाएर यसको विरोध गरेका थिए ।
चीनको सतर्क मनोवृत्ति
कालापानीको विषयमा जब भारत र नेपालको विवाद भयो चीनले दुवै देशलाई मैत्रीपूर्ण छलफलबाट यसलाई सुल्झाउन सल्लाह दियो । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भने – दुवै देशहरु एकतर्फी कारवाहीबाट बच्नुपर्छ । यसबाट विवाद धेरै अल्झिन सक्छ । चीनको बयानबाट यो भने प्रस्ट हुँदैन कि उसले कसको कारवाहीलाई एकतर्फी कारवाही भनिरहेको छ ।
भ्रम यसकारण पनि पैदा भयो किनकि यो मुद्दा त ५ वर्ष पहिले मोदी र शी जिनपिंगको कुराकानीमा उठिसकेको थियो । त्यसो भए के चीनको बयानको अर्थ यो हो कि ऊ केवल नेपाललाई यो सन्देश दिने कोसिस गरिरहेको छ कि उसले आफ्नो तर्फबाट नयाँ नक्सा जारी नगरोस् ?
दस्तावेज के भन्छन् ?
दस्तावेज भन्छन् कि अंग्रेजहरुले नक्सा बदलेर जुन इलाका नेपालसँग खोसेका थिए त्यहाँ भारतमा त्यतिबेलाको ब्रिटिश हुकुमतको अधिकार थिएन । नेपालमा १९५९ मा चुनाव भयो । त्यतिबेला लिम्पियाधुराका नागरिकले चुनावमा भाग लिएका थिए । १९६१ मा नेपालमा जुन जनगणना भयो त्यसमा पनि यो नेपालकै हिस्सा थियो । तर, त्यसपछि यो हिस्सा नेपालबाट अलग हुँदै गयो ।